GOCHA GARAA JABUMMAA OROMIYAA KIBBAA DHEEDA .. | Kichuu
GOCHA GARAA JABUMMAA OROMIYAA KIBBAA DHEEDA ..
Posted on April 19, 2020 by kichuu_admin
GOCHA GARAA JABUMMAA OROMIYAA KIBBAA DHEEDA BOORANA LIIBAN GODINA GUJII BAHAATTI RAAWWATAME:
Dhukkuba COVID-19 ittisuuf walqabatee mootummaan Xoophiyaa🇪🇹🇪🇹🇪🇹 ji’a Ebla 8 ,2020 labsii muddumaa labsuun beekamaadha.
– Yoo dhageennu koronaa ittisuuf ture.
Garuu; kibba Oromiyaa dheeda Boorana Liiban godina Gujii Bahaa keessaatti gochaan raawwatame kan laala namaa gubee hirriiba dhowwuufi waraana sammuu namatti kaasuudha.
-Ummata Oromoo godinoota Booranaa, Gujii Bahaafi Lixaa akkasumas Oromiyaa lixaa Wallaggaatti dhiyeenyummatti gocha raawwatamaa ture namni baayyeen waan irraanfatu natti hin fakkaatu.
Gochaan Godina Gujii Bahaa dheeda Liiban horsiisee bultoota Booranaa aanaa Liibaniifi Gumii Eeldalloo irratti raawwate waan lamaan adda tayee mullata.
1. Mana gubanii jiru. Kan adda godhu maatii mani irraa gubatee iddoo itti deebiyu hin qamneefi yeroon yeroo sababa dhibee COVID-19 namni wal irraa baqatu yoo ta’u, Horii isaanii guutuu irraa fuudhuun duwwaatti hambisuudha.
2. Manneen guban kanneen keessa qabeennii miyaa gubateera. Kun haarayaa miti. Tarii kan adda godhu ummatichii horsiisee bulaa ta’u irraan kankaye horiin akka jabbiifi illmoolee re’ee, akkasumas Lukkuu manatti galu. Yeroo mana guban horii kan guutuu waliin guban.
. Lubbuu nama ijjeessanii dannaba fuudhan. Dannaba jechuun horii diinnii yeroo nama weeraree nama injifatu fudhatuudha. Haga harka abbaatti hin deebiyin horiin sun dannaba jedhama.
Qabxiin 3ffaa kun kan raawwate Ebla 14,2020 godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeldalloo ganda Dibbee ona Eeldiimaa ollaa aabba Okkotuu Kaarruu Guyyooti. Jaarsii abbaa ollaa kun akka warrii achi jiran himanitti rasaasa 4 qaama poolisii addaa Oromiyaa jedhamtu irraa itti dhuqaafameen du’e. Gaaffii ergaa gaafatanii boodaadha, jaarsa kan ijjeesan.
Gaaffiin waraanni Mootummaa Xoophiyaa kun aabba Okkotuu Kaarruu osoo bobbaa looniitu galuu gaafate akkas turee jedhan;
WX: Aabba Shanee gartee?
Jaarsa: Hin garre
WX: Deebiin isaanii rasaasaa ture.
Eega gocha kan isanumtii maqaa itti moggaasa jedheen dabra.
Weerara qaamni waraana mootummaa Xoophiyaa horsiisee bultoota Oromoo Booranaa godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eeldalloo ganda Dibbeetti geggeesse kanaan;
– Lubbuun nama tokko baateera
– Manneen 18 gubataniiru
– Madhaa maatiin manneen 30 ol buqqifamaniiru
– Horiin Loon, Gaalaa, re’een karra hedduu akka dannabaa fuudhamanii ganda Booba jedhamutti walitti qabamaniiru.
Manneen gubatan kan eenyuu fa’a isaa jedhuuf, namoota asii gadii kanaadha. Jiraattota biyya Xoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Gujii Bahaa dheeda Liiban aanaa Gumii Eeldalloo ganda dibbeeti.
4.Haadha Liiban Jaatanii
5.Okkotuu Kaarruu Guyyoo (isaas ijjeesaniiru)
12.Jaartii Jibicha Baggajjaa
13. Qallaa Daalacha kusuu
14. Mamaa Jibichaa
Manneen kanneen keessa meeshaa manatiin alatti lmooleen re’ee, Jabbii, Lukkuufi midhaan nyaataati. Gootaraan kuusaa midhaanis gubataniiru. Laala garaacha badheessaa, qabbana nannaqii roobaa, jiruu horsiisee bulaa yaadachaa imimmaan sammuu keessaatti nama copha. Eega kun kan raawwatte mootummaa dimookiraatawaa biyya keenya bulchaa jiru
Eebila 16, 2020 godina Gujii Bahaa horsiisee bultoota Oromoo Booranaa aanaa Liiban ganda Dhakaa Qallaa irratti qaama waraana mootummaa xoophiyaatin weerarri walfakkaatan raawwatameera. Weerara kanaan:
– Manneen lama gubataniiru
( Mana Bonayyaa Saara Boruu Riiboo
Mana Gonnicha Saara Boruu Riiboo)
– Horiin akkuma dannabaa fuudhamee madhaa maatii waliin hidhame.
– Madhaa maatiin manneen 15 ol buqqifamaniiru .
Eebila 13-16, godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti Oromoon Gujii 300 ol ta’an mana hidhaatti guuramaniiru.
Akkasuma G/Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisootti namoonni 30 ol akka hidhaman himamaa jira.
Eebila 14-17, godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa keessaatti Oromoonni Booranaafi Gujii 250 ol tahan hidhamaniiru.
– Namoonni hidhaman kunneen kabinee, hojjattoota mootummaa, jaarrolee biyyaa, qaamota seeraa, nadheenii ijoollee adoo hin jedhin walii galaa hidhaa jimlaan akka hidhaman jiraattoonni ni dubbatu.
Dabalataan namoota hidhaman kanneen keesaa:
Nadheen uulmaatti jira.
Huwwiitti uulmaa Darmii Tukkisee jedhamti. Haga deettee/ssee bultii 7 bulte. Daayima haga dhalatee bultii torbaa waliin mana hidhaatti darbatan. Huwwittiin/Dubartiin tun hospitaala Nageellee Booranaatti opporeeshiiniin deette. Darmiin haadha warra barsiisaa barsiisaa Dhaddacha Galgalooti. Namni dhufee manaa fuudhe milishaa maqaan isaa Addisuu jedhamuudha.
– Huwwooleen 11 haawwan daa’ima hoosisaa jjraniidha.
– Huwwiittiin tokko ta Lemlem jedhamtu ulfaa ji’a sagaliiti. Da’uuf halkan alatti hin hamneef.
Walumagalatti gochan kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa aanaalee Gooroo Doolaa, Gumii Eeldalloofi Liiban, magaaloota Harqalloo, Shaakkisoo, Bulbuliifi Nageellee Booranaa keessaatti ilmaan Oromoo irratti mootummaa biyya bulchuun raawwatamaa jiru gocha dhala namaaf hin malle, garaa jabummaa lubbuu qabeeyyii kamu irratti raawwachuuf hin eeyyamamne waan tayeef dhaabbileen mirga ilmaan namaaf falman kamu akka dura dhaabbatanii ummata kan bararan gaafadha.
Deeggarsii lamummaas ummata kanaaf akka godhamu qaamolee gargaaruuf fedhii qaban hundaaf waamicha dhiyeessa!
Dhala namaaf mirgi namummaa ha eeggamu!
Via: Shalom BG Jato
Boorana magaalaa Moyaaleetti Dargaggoonni lama poolisoota pp tiin ajjeefamuutti mufachuun ummanni fincilatti seenee jira.
Warri Maqaa Xoophiyaatiin socha’an Oromiyaa fi Oromoo diigaa jiru!